फोन ह्याङ भएर तनाव हुनुहुन्छ? अपनाउनुहोस् यी उपायहरू | Hamro Biratnagar
गृह पेज विज्ञान र प्रविधि टेक्नाेलाेजी फोन ह्याङ भएर तनाव हुनुहुन्छ? अपनाउनुहोस् यी उपायहरू
फोन ह्याङ भएर तनाव हुनुहुन्छ? अपनाउनुहोस् यी उपायहरू
विराटनगर। असाेज ४
स्मार्टफोनको प्रयोग गर्दै जाँदा हामीले आफ्ना प्राय कामहरु स्मार्टफोनबाट नै गर्छौ । आवश्यक डाटा लगायत अफिसका कामहरू पनि स्मार्टफोनबाट नै गर्ने गर्छौँ ।
अत्याधिक प्रयोग र डाटाहरूले गर्दा हाम्रो फोन ह्याङ हुने, ढिलो चल्ने हुन्छ । आवश्यक कामहरू छिटो गर्नुपर्दा हामीलाई यसले कठिनाई पर्छ । यो अवस्थाबाट केही हदसम्म छुटकारा पाउन तलका उपायहरु अपनाउनुहोस् ।
● फोन ह्याङ हुनबाट रोक्नका लागि तपाईंले आफ्नो स्मार्टफोनमा अटो डाउनलोडलाई बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सुरुमा फोनको सेटिङ हुँदै सफ्टवेयर अपडेटमा जानुहोस् । जहाँ तपाईंले अटो डाउनलोडको विकल्प देख्नुहुनेछ । यसलाई बन्द गरिदिनुहोस् ।
● यसैगरी आफ्नो स्मार्टफोनमा एपको अटो अपडेट पनि बन्द गरेर राख्नुहोस् । त्यसका लागि प्ले स्टोरको सेटिङमा गएर ‘डन्ट अटो अपडेट एप्स’ मा ट्याप गर्नुहोस् । त्यस्तै आफ्नो फोनको अकाउण्ट एण्ड ब्याकअप सेटिङमा जानुहोस् । त्यसमा सबैभन्दा तल अटो सिंक डेटाको अप्सन रहेको छ, त्यसलाई बन्द गरिदिनुहोस् । यसबाट तपाईंको फोन अनावश्यक डेटाबाट भरिने छैन ।
● सँगसँगै फोन ह्याङ हुन नदिन रिसेन्ट वा नेभिगेसन बटनमा दबाएर त्यहाँ रहेका एप क्लियर गरिदिनुहोस् । यसका साथै ब्याकग्राउण्डमा चल्ने एपसमेत बन्द गरिदिनुहोस् ।
● जुन एप त्यति धेरै प्रयोगमा आउन्न, त्यसलाई एप सेक्सनमा गएर डिलिट गर्नुहोस् । यसका लागि तपाईं डिलिट गर्न चाहेको एपमा लामो समयसम्म दबाएर समेत अनइन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ । जसले गर्दा तपाईंको फोनको मेमोरी केही हदसम्म भए पनि खाली हुनेछ ।
● स्मार्टफोनको पृष्ठभूमिमा चल्ने प्रोसेसलाई समेत बन्द गरिदिनुहोस् । त्यसका लागि आफ्नो फोनको सेटिङमा जानुहोस् । त्यसमा सबैभन्दा तल रहेको अबाउट फोनमा ट्याप गर्नुहोस् । जसमा तपाईंले फोनको डेभलपर अप्सन फेला पार्नु हुनेछ ।त्यसलाई तपाईं अबाउट फोन अप्सनको तल देख्नुहुनेछ । त्यसपछि नो ब्याक ग्राउण्ड प्रोसेसमा दबाउनुहोस् । यसो गर्दा फोनको ब्याकग्राउण्डमा कुनै पनि एप प्रोसेस हुने छैन ।
● मोबाइलको सेटिङमा जानु होस् । त्यहाँ रहेको अबाउट फोनमा दबाउनुहोस् । फेला पार्नुभएन भने यो अप्सन सिस्टम भित्र हुनसक्छ । अब तपाईंले त्यहाँ बिल्ड नम्बर देख्न सक्नुहुनेछ । त्यसमा लगातार छ-सात पटक थिच्नुहोस् ।अब डेभलपर अप्सनमा प्रवेश गर्नुहोस् र त्यसलाई अन गर्नुहोस् । जब तपाईं डेभलपर अप्सन खोल्नुहुन्छ, त्यससँगै अनेकौं अप्सनहरु देख्न सक्नुहुनेछ । अब यसमा रहेका विण्डो एनिमेसन जूम, ट्रान्जिसन एनिमेसन स्केल र एनिमेटर ड्युरेसन स्केललाई बन्द गरिदिनुहोस् ।
● फोनको स्टोरेज तथा फाइल्सभित्र रहेको क्यास डेटा तथा मेमोरीलाई नियमित रुपमा डिलिट गर्ने बानी बसाल्नुहोस् । यस बाहेक होम स्क्रिनमा रहेको सकेसम्म थोरै आइकन मात्र राख्नुहोस् । अनावश्यक तथा अतिरिक्त फाइलहरु डिलिट गर्नुहोस् ।
अघिल्लो समाचारमुख्यमन्त्री राईमाथि मुद्दा चलाउने महिला प्रहरी नियन्त्रणमा
अर्को समाचारसन्दीप लामिछाने आबद्ध दिल्लीले आज खेल्ने
भायानेटले ल्यायो ईएमआई अफर, इन्टरनेटको पैसा किस्तामा तिर्न सकिने
नेपालमा कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या बढ्दै, एकैदिन थपिए १७ सय ३६ जना...